ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ထားဝယ်. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် တနင်္သာရီတ
ⓘ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ထားဝယ်. ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်မြို့၊ လေယဉ်ကွင်းလမ်း၊ ညောင်ရမ်းတောင်ရပ်တွင် တည်ရှိသည်။ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်က ..
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ထားဝယ် ကို ၂၀ဝ၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့မှစ၍ ရှမ္မလည်ဆွဲရပ်တွင် တည်ရှိသော ထားဝယ်ပညာရေးကောလိပ်ဝင်းအတွင်းတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်တွင် ကွန်ပျူတာအသုံးချ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းနှင့် ပထမနှစ်သင်တန်းဟူ၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ၂၀ဝ၂ ခုနှစ်အတွက် ပထမနှစ်ကျောင်းသူ၃ဦး နှင့် ကွန်ပျူတာအခြေခံ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းသား ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ဦးရေ ၄၄ ဦးဖြင့် စတင်သင်ကြားပို့ချခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်စဉ် ကွန်ပျူတာကောလိပ်ထားဝယ်မှ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဘွဲ့ရများ မွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိရာ ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကောလိပ်အဆင့်မှ တက္ကသိုလ်အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ထားဝယ်မှ မဟာသုတသိပ္ပံဘွဲ့ရ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ ၂ ဦးကို ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည်။ ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှစ၍ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ထားဝယ်ကို ယခုလက်ရှိ တည်နေရာဖြစ်သော လေယဉ်ကွင်းလမ်း၊ ညောင်ရမ်းတောင်ရပ်သို့ ပြောင်းရွေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ထားဝယ်မှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပို့ချလျှက်ရှိသော သင်တန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ထားဝယ်မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော ဘွဲ့ဒီဂရီများနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်/ ကွန်ပျူတာသုံး စာစီစာရိုက်နှင့် ရုံးသုံးကွန်ပျူတာအသုံးချ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်